News924Online - NO 1 NEWSPORTAL IN TOWN
गर्भावस्थामा यौyyन सम्पर्क कसरी गर्ने ?
यस्तो छ तपाईको बिहिबारको भाग्य, बैशाख २ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
नयाँ वर्षकै दिन नाजिर हुसेनसँग इन्गेजमेन्ट गरिन् चर्चित नायिका केकी अधिकारीले, विबाहको मिति समेत तय गरे दुवैले एकसाथ खुशी भएर
इसेवाले माग्यो २६५ कर्मचारी, घरबाटै काम गर्न मिल्ने
त्यसपछि रोशिनिले युवकलाइ फोन गरिन र २५ वर्षकी केटीलाई अगाडी ल्याएर भनिन् …..
एजेन्सी । महिलाको एक जटिल अवस्था हो गर्भावस्था , जुन अवस्थालाई सन्तान उत्पादनको विन्दु पनि भनिन्छ । हुन त महिलालाई सृष्टिकर्ताको उपमा दिईएको छ । त्यसो त त्यहाँ पुरुषको पनि उत्तिनै भूमिका रहेको हुन्छ । यौन जीवित प्राणीका लागि एक आधारभूत आवश्यक्ता हो । यो बाट अछुत कोही पनि रहन सक्दैनन् । उनीहरुलाई जत्तिखेर पनि […]
Posted on April 14, 2021 April 14, 2021 Author admin	Comment(0)
मेष – नयाँ प्रविधी तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत वौद्धिक स्तर फराकिलो बनाउन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्न सकिने हुनाले पद प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहेको छ । भौतिक सम्पत्तीको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर आकर्षित पार्न सकिनेछ । तर पनि बाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । वृष – खानपानमा ध्यान दिनुहोला […]
काठमाडौँ । नयाँ वर्षकै दिन नाजिर हुसेनसँग इन्गेजमेन्ट गरिन् चर्चित नायिका केकी अधिकारीले । जुन कुरा वास्तविक नभएर यो जोडीले म्यूजिक भिडियो र चलचित्रमा देखिएको दृश्य हो ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****** Read more मेष मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिनामा अल्लि बढी दौडधुप पर्नेछ । र […]
नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे इसेवाले २६५ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । बजार प्रतिनिधिको रूपमा देशका विभिन्न ठाउँमा बजार प्रतिनिधि पदमा काम गर्न कम्पनीले कर्मचारीले माग गरेको हो । यसअन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, चितवन, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, दमक, धरान, हेटौंडा, बागलुङ, लाहान, राजविराज, दाङ, सुर्खेत, विर्तामोड र वीरगञ्जमा काम गर्न कर्मचारी माग गरिएको हो । […]
काठमाडाैं – मध्य प्रदेशमा बिहेको बहानामा बेहुलामाथि ठगी हुने गरेको एक अनौठो घटना बाहिरिएको छ। भाेपालमा बिहेको बहानामा ठगी हुने गरेको रहस्य बाहिरिएको हो। भोपालको कोलार इलाकामा सञ्चालित सगुन जन कल्याण समिति विपन्न केटीहरूको विभिन्न क्षेत्रमा पर्चा बाँड्ने गर्छ। त्यहाँ मानिसहरू केटी हेर्न आउँदा २० हजार लिने गरिन्छ। त्यसपछि बिहेको मिति तय गरिन्थ्यो। मध्य प्रदेशका […]
अष्ट्रेलिया देश नेपालको लागि अहिले भने अपरिचित देश रहेन । बाह्र पास गरेर अधिक्तम बिद्यार्थीहरु पढ्न र कमाउन भन्दै सपनाको देश अष्ट्रेलिया हुइकिन्छन् ।अष्ट्रेलियामा नेपालिहरुलाई गरिने व्यवहार पनि राम्रो नै छ । तर आफ्नो परिवारबाट टाढा बसेर आफू कमाउने भैसकेपछि आफ्नो मर्जि उपर काम गर्ने भएपछि यसरी अष्ट्रेलियामा नेपाली नेपाली बिच नै कु`टा`कुट भएको छ […]
भोलिदेखि ४ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय, पूरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले चार दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नयाँ वर्षमा यहाँ मनाइने बिस्काः अर्थात् बिस्केट जात्रा स्थानीयवासीले आजदेखि भव्यरूपमा मनाउने भएपछि नगरपालिकाले पहिलोपटक चार दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले विगतका वर्षहरुमा वैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा मात्रै बिदा दिँदै आए पनि गत वर्ष १ र २ […]
यी गायिकाको नयाँ गीतले ‘ग्यांनम स्टाइल’लाई पनि पछि पार्दै बनायो २ वटा विश्व रे क र्ड (भिडिओ हेर्नुस्)
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जालले अहिले फरक प्रतिभा भएका ब्यक्तिलाई बेरमै विश्व चर्चित बनाउँछ । आफुलाई सामान्य लागेका कुरा पनि विश्वले मन पराउँछ । नेपालमा अहिले एउटा गीत निकै चर्चित भएको छ । १२ वर्ष अघि रेकर्ड गरिएको गीत अहिले यति चर्चित होला भन्ने गीतकार र गायकले पनि अनुमान गरेका थिएनन् । फुलबुट्टे सारीको चर्चाले अहिले […]
टिकटक मा यी युवतिले यस्तो हर्कत गरे पछि भिडियो भयो भाइरल (हे’रौं भिडियो)
अधिकाँश जोडीलाई अवलोकन गर्दा उनीहरुबीचमा उमेरको अन्तर हुन्छ । र पुरुषको उमेर महिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ । उमेरको अन्तर हुने स’म्बन्ध लाई सबै सुमधुर र कायम राख्नका लागि बढी उमेर हुने ब्यक्तिले जहिले पनि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****** यहाँ […]
सावधान ! शिक्षा मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो देशैभरिका बिधालयहरुका लागि यस्तो सुचना ।
काठमाडौं । नेपालमा पनि कोरोनाको त्रास बढेको भन्दै सरकारले शिक्षकहरुलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा हुन रोक लगाएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरेको हो । हाल शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलानको काम भइरहेकाले जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई […]